Ahoana ny fomba hanampian'ny hetsika «biby miompy» hiompana amin'ny fizahan-tany any Oganda
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Ahoana ny fomba hanampian'ny hetsika «biby miompy» hiompana amin'ny fizahan-tany any Oganda
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
"Pet a Tree" Fizahan-tany Oganda
Tetikasa fanovana toetrandro "Pet a Tree" natombok'i Ogandà avy amin'ny minisitry ny fizahantany, Honorable Martin Mugarra Bahinduka, fandraisana andraikitra avy amin'ny maso ivoho tsy miankina amin'ny fanjakana Africa Tourism and Initiatives momba ny tontolo iainana ny 5 aogositra 2021, tao amin'ny Ivotoerana Fanabeazana Bibidia Uganda Wildlife (UWEC) ao Entebbe.
Nandritra ny fandefasana ny hetsika, ny praiminisitra dia nanome toky ny fanohanany tanteraka ny fikambanana.
Ny tetikasa dia eo ambanin'ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana any Oganda amin'ny fampielezan-kevitra hazo 40 tapitrisa.
Nanazava ny Minisitra fa ny fifandraisana misy eo amin'ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana dia miankina amin'ny fiainana ny bibidia izay mila ny hazo hahavelomana. Noho izany dia ilaina ny mitahiry hazo efa misy raha mamboly bebe kokoa.
Ny tontolo iainana, amin'ny toetrany voajanahary, ara-kolontsaina, ara-tsosialy, dia maneho ny antony manosika ny fitsangatsanganan'ny mpizahatany, raha ny tontolo madio sy tsy miova kosa dia tsy misy raha tsy manao fizahantany ara-tontolo iainana.
Ny talen'ny Country of the Uganda World Wildlife Fund (WWF), Andriamatoa David Dduli, dia nisaotra ireo mpanorina ny “Miompy hazo” amin'ny fiterahana toy ny hetsika mamirapiratra toy izany, ary nanolo-tena ny fanohanan'ny fikambanana tamina hetsika mikendry ny famerenana amin'ny laoniny ny hazo. “Mila fanentanana ny tanora hanatevin-daharana ilay hetsika. Ny anaran'ny biby dia anisan'ny fomban-drazana Afrikana foana, ary miteraka firaiketam-po izany. Andao hampiasa ny 'Pet a Tree' hamerenana ireo fampiharana ny anaran'ny biby fiompy, ”hoy i Duli. “Mijoro eo amin'ny fotoana iray nananan'ny razambentsika sy very isika, ary anjarantsika izao ny mamerina azy io ho an'ny taranaka ho avy.”
Ny Lehiben'ny Birao misahana ny fizahantany sy ny tontolo iainana any Afrika, izay Lehiben'ny Birao an'ny Fikambanan'ny tompona hotely Uganda, Ramatoa Susan Muhwezi, dia nisaotra ny Fahefana Nasionalin'ny ala (NFA), WWF, UWEC, ary ny minisiteran'ny fizahantany Wildlife ary Antiquities amin'ny fanohanana fandraisana andraikitra mahavariana toy izany izay mifantoka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny biodiversité. Niresaka momba ny fanohanany tsy tapaka ny fandraisana andraikitra tahaka izany amin'ny fahaizany manokana izy ary hanohy hanao izany. Nanohitra ny governemanta sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana i Ramatoa Muhwezi mba hanohana hatrany ny fandraisana andraikitra ataon'ny tanora hampandroso ny firenena.
Ny Tale Mpanatanteraka UWEC, Dr. James Musinguzi, dia nanoro hevitra ireo Ogandey mba hanao fanao amin'ny fambolena hazo amin'ny fotoan-dehibe toy ny mariazy, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, sns. angamba sambany teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Tokony hekentsika ny fanamby fototry ny fiovan'ny toetrandro. ”
Ny minisitry ny tontolo iainana, Honorable Beatrice Anywar, dia natolotr'i Stuart Maniraguha, talen'ny fambolena ao amin'ny NFA, izay nanantitrantitra ny filàna fambolena tany 124 hektara farafahakeliny isan-taona ao anatin'ny hetsika mikendry ny hamerina ilay rakotra ala very. Nilaza izy tao anatin'ny 30 taona, ny isan'ny mponina dia nihena hatramin'ny 24% ka hatramin'ny 8% fa milaza kosa ankehitriny fa misy taratra fanantenana miaraka amina fandraisana andraikitra tahaka izany. Ny fiatraikany dia tsapan'ny fiakarana ho 10% ny rakotra ala, ary nampanantena ny fanohanan'ny NFA ny hetsika “Pet a Tree” izy. Niantso ny fanentanana sy fandraisana anjara isaky ny Ogandey sy fikambanana hanatevin-daharana ny fampielezana ny toetrandro amin'ny hetsika mikendry ny hamerina amin'ny laoniny ny natiora izy.
Ny minisitry ny fizahan-tany ao Tooro, Joan Else Kantu, tamin'ny anaran'ny fanjakana dia nanolotra ny hetsika «Pet a Tree» tany 5 hektara hambolena ala any Tooro amin'ny fampiasana ny anaran'ny biby fiompy Tooro. “Mihaino ny fitarainan'ny natiora isika. Ity ala ity dia hanomezana toky ny zafikelinay hankafy ny zava-manan'aina toy ny nankafizinay azy. ”
Amumpaire Moses Bismac, ilay mpanorina ny “Pet a Tree” ary ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy ny tontolo iainana any Afrika, dia naneho ny fankasitrahany ireo masoivohon'ny governemanta WWF, National Forestry Authority, Oganda Wildlife Education Center, ary Uganda Wildlife Authority noho ny fanohanany ny hetsika “Pet a Tree”. Niantso ny mpanao gazety namany sy ny Ogandey rehetra izy mba hanana hazo Pet iray farafaharatsiny. “Amin'ny fomba manokana, mankasitraka ny fanohanan'ny WWF aho amin'ny fandraisana andraikitra momba ny tontolo iainana sy ny fanohanan'ity fanentanana 'Pet a Tree' ity.”
Any Oganda, ny Fanjakana Bunyoro-Kitara, iray amin'ireo andrim-panjakana ara-kolotsaina dia nanamboatra zana-ketsa fa tsy fehiloha amina fandevenana natombok'i Omukama (Mpanjaka) Solomon Gafabusa Iguru I hamerina handamina indray ilay fanjakana, fanao iray izay nanomboka niorim-paka tao amin'ny taona vitsivitsy lasa.